China FerroChrome ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Feng Erda
Ferrochrome (FeCr) bụ alloy nke chromium na ígwè nwere ihe dị ka 50% na 70% chromium.Over 80% nke ụwa ferrochrome na-tinye n'ọrụ na mmepụta nke igwe anaghị agba nchara. Dabere na ọdịnaya carbon, enwere ike kee ya: % -0.5%), Micro carbon ferrochrome / MCFeCr: (C: 0.03 0.15%). China maka ịbawanye ụba nke mmepụta ferrochrome ụwa.
Basic Ozi ：
chemical mejupụtara （wl%）
A rụpụtara na mmepụta nke igwe anaghị agba nchara， Igwe anaghị agba nchara na-adabere na chromium maka ọdịdị ya na iguzogide nrụrụ.
As isi alloy mmako na steelmaking
Ọ bụ ihe dị mkpa dị mkpa na usoro nke ikuku carbon dị ala
Osote: Gingkpụzi ígwè bọl
Ahịa ụgbọ ala Chrome
Carbon Ferro Chrome dị elu
Carbon Ferro Chrome dị ala